Jawaari: Dowladda Soomaaliya ma aqoonsan doonto natiijada shirka Koonfur Galbeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Jawaari: Dowladda Soomaaliya ma aqoonsan doonto natiijada shirka Koonfur Galbeed * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jawaari: Dowladda Soomaaliya ma aqoonsan doonto natiijada shirka Koonfur Galbeed
By A warsame on 17th November 2014
Mareeg.com: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si cad u sheegay in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya aysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda shirka maamul u sameynta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, kaasoo madaxda dowladdu horay u amreen in la hakiyo si wadatashi loo sameeyo.
WAR-SAXAAFADEED kasoo baxay xaffiiska gudoomiye Jawaari ayaa u qornaa sidan:-
Annagoo ka duuleyna qodobka 11aad ee heshiiskii laba dhinaclaha ahaa maamul dhisidda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qeexayey “Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa mas’uul ka ah meel-marinta iyo taabbo-gelinta heshiiskan” ayaa Madaxda ugu sareysa Dowladda Federaalka Soomaaliya 9kii bishan November si mideysan u go’aamiyeen hakinta iyo toosinta habraaca maamul dhisidda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayadoo qaadashada go’aankaasina uu ka dambeeyey tixgelinta cabashooyinka kasoo yeeraya Odayaasha dhaqanka,siyaasiyiinta,bulshada rayidka iyo ergooyinka weli dibadda ka jooga howlaha geedi socodka maamul dhisidda gobollada Koonfur Galbeed.
Iyadoo sidoo kale la ogsoon yahay go’aankii Ra’isulwasaaraha Xukuumadda ee soo baxay 01-11-2014 oo cadeynayey in aanan la qaban karin doorasho inta ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ka hubineyso iney si buuxda uga wada qeyb qaataan qeybaha bulshada ka go’aan gaarista masiirka iyo maamul u dhisidda gobollada Koonfur Galbeed.
Hadaba ayadoo la xeerinayo qodobbadan kor ku xusan waxaa halkan looga digayaa guddiga iyo ergada shirka maamul dhisidda Koonfur Galbeed iney ku kicin wax carqalad ku keeni kara habsami u socodka maamul dhisidda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale go’aammo dhalin kara carqalad,xasilooni darro iyo dib u dhac baaxad weyn oo ku yimaada xaqiijinta himilada dhismaha maamul loo wada dhan yahay.
Ugu dambeyn waxaan halkaan ku cadeynayaa natiijo kasta oo khilaafsan go’aannada Dowladda ee kor ku xusan ineysan Dowladda Federaalka Soomaaliya aqoonsan doonin ayadoo taasina ay xad gudub ku noqoneyso Dastuurka Dalka qodobkiisa 48aad,farqada 2aad ee siineysa Xukuumadda Federaalka awoodda hagidda iyo maamul dhisidda gobollada dalka,mas’uuliyadda wixii cawaaqib xumo ah ee ka yimaadana ay qaadi doonaan cidii ku xad gudubta go’aammada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Warkan kasoo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliy ayaa kusoo beegmay xilli uu shalay magaalada Baydhabo oo shirkaasi ka socdo uu gaaray Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasoo wrgada ka hor sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
Qaar ka mid ah Ergada shirka ka qeybgeleysa ayaa diiday go’aankii horay uga soo baxay saddexda mas’uul ee dowladda Soomaaliya ugu sareeya ee lagu hakinayey shirkaas, waxeyna sheegeen in maanta ay dooranayaan madaxweynaha maamulkaas.
Madaxda dowladda oo markii hore shirka furay ayaa markii dambe waxey garteen in la hakiyo mudo labo todobaad ah, si ay shirka looga qeybgeliyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolladaas oo diidan qaabka wax loo wado, waxaana ragaas ka mid ah Madoobe Nuunow Maxamed.